Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ngukuhambisa amazwi Akhe,
azoveza inguquko enkulu kumuntu,
izinguquko ezinkulu kakhulu kunalezo ezavezwa yizibonakalisoeziyisimangaliso nezimanga
ezazikhonjiswa nguNkulunkulu kumuntu ngesikhathi seNkathi Yomusa eyayandulela.
Ngoba ngaleso sikhathi, amadimoni ayebaleka ngokubekwa kwezandla.
Kodwa isimo esikhohlakele somuntu sasala singathintekile ngaphakathi kuye.
Umuntu wasindiswa ekuguleni futhi wathethelelwa izono zakhe.
Kodwa umsebenzi wokukhipha isimo sakhe sobusathane
Ngokukholwa nangoNkulunkulu osesimweni somuntu, ngomhlatshelo Wakhe wesono,
izono zomuntu zathethelelwa, kodwa imvelo yakhe yokona isele futhi ugcwele isono.
Umuntu uyazabalaza kodwa akanandlela
yokuqonda ngempela indlela yokuqeda isono sakhe,
ukulahla imvelo yakhe embi,futhi aguquke ngokuphelele.
Ngoba umuntu usaphila ngesimo sakhe esikhohlakele,
kufanele asindiswe kuso alahle isono bese eguquka.
Kulokhu, udinga ukwazi indlela eya ekukhuleni kokuphila
nokuguquka kwesimo sakhe, kanye nendlela yokuphila.
Lapho umuntu enza ngokuhambisana nendlela ebekwe nguNkulunkulu,
isimo sakhe singaguqulwa, futhi angaphila ekukhanyeni,
futhi enze zonke izinto ngokuzwana nentando kaNkulunkulu,
alahle imvelo yakhe ekhohlakele, futhi aqhamuke esekhululeke ngokugcwele esonweni.
Ukuphunyuka esonweni kuphela okungenza umuntu emukele insindiso egcwele.
Lesi sigaba sinomqondo omningi kakhulu, futhi sinomphumela omningi kakhulu.
Yizwi eliphilayo elinika umuntu ukuphila ngokuqondile,
futhi lenze umuntu ukuba avuselelwe ngokugcwele ngalokhu ngomsebenzi kaNkulunkulu,
ngalo msebenzi ophelele kaNkulunkulu.
Okwedlule：Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
Okulandelayo：UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe